पाँचौ पर्वत महोत्सवको समापन समारोह राजनीतिक दलहरुव्दारा बहिष्कार ? – ebaglung.com
२०७३ माघ २२, शनिबार २०:२३	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
पाँचौ पर्वत महोत्सव सफल भएको भन्दै न्यायाधीश भट्टराईले दिए आयोजकलाई बधाई !
महेन्द्र केसी,पर्वत २०७३ माघ २२ । पश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा पाँचौ पर्वत महोत्सवको समापनको दिन आज दर्शकहरुको निकै राम्रो सहभागिता देखेर खुशी भएका आयोजकहरु त्यतिबेला निराश बन्न पुगे जब समापन समारोहमा जिल्लामा रहेका १६ राजनीतिक दलहरुका कुनैपनि प्रमुख या प्रतिनिधीहरुले सहभागिता जनाएनन् । राजनीतिक दलहरुको बहिष्कारले महोत्सवका आयोजकहरुमा अनुहार मलीन बनेको देखियो ।
स्मरणीय छ, महोत्सवको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत माघ १३ गते गरेका थिए । उद्घाटनका अवसरमा भन्ने सबै राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अरु दिनहरु भँन्दा आज दर्शकको संख्या बढी थियो ।
विभिन्न घटना तथा परिघटनाका कारणले हालसम्मकै अव्यवस्थित, असुरक्षित एवं आलोचित बनेको महोत्सवको समापन समारोहमा जिल्लामा कृयाशील कुनैपनि राजनीतिक दलले सहभागिता नजनाउनुले महोत्सवको अन्त्य अत्यन्तै निराशाजनक बनेको एक आयोजकले ईबागलुङलाई बताए । हामीले केहि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सोधेका थियौँ, महोत्सवको समापन समारोह बहिष्कार पूर्वनियोजित थिया ? सबैको सल्लाहले सहभागिता नजनाउनु भएको हो ? तर नेताहरुले पूर्व नियोजित वा सरसल्लाहले समापन कार्यक्रममा नगएको होईन त भने नजानुको स्पष्ट कारण भने खुलाएनन् ।
समापनका दिन व्यापार राम्रो थियो
समापन समारोहका प्रमुख अतिथी जिल्ला न्यायाधीश माधवराज भट्टराइले महोत्सव सफल भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि आयोजकलाई बधाई दिएका थिए ।
दर्शकहरुका अनुसार अन्य दिन भन्दा आज महोत्सव निकै उत्साहवर्धक थियो । दर्शकहरु बढीसंख्यामा महोत्सव हेर्न आएका थिए । आज समापनको दिन भएरनि हुनसक्छ, दर्शक बढी आए । महोत्न्सव स्थलबाट बाहिरीँदा प्राय: सबैजसोको हातमा महोत्सवमा राखिएका स्टलहरुबाट खरीद गरिएको केहि न केहि बस्तु रहेको थियो । दर्शकहरु भन्दै थिए, ‘आयोजकको बुद्धि पछी आयो, शुरु देखिनै महोत्सवको महत्व बुझिदिएर आयोजकहरुले काम गरिदिएको भए महोत्सव साँच्चिकै महोत्सव बन्ने थियो । न सुव्यवस्थापन न शान्तिसुरक्षाको उचित प्रवन्ध, न लघुउद्यमीहरुको व्यापार धेरै कुराहरुको कमी कमजोरीले महोत्सव केवल लोकदोहोरी जात्रा बन्न पुग्यो ।
तस्वीर- प्रकाश पौडेल, पर्वत ।